Ipleyiti yesikrini yenzelwe ngezinto ezizodwa kwaye inobomi benkonzo ende; isantya sokungcangcazela kweplate ye-sieve ngamaxesha angama-800 / min, kunye nokuqina kwentshukumo yezixhobo kuphezulu njenge-50g; ukulungiswa kweplate ye-sieve akufuneki naziphi na iibholiti, ke kulula ukudibanisa kunye nokutshintsha.
Isikrini esimile sebhanana
I-Czxd uhlobo lwebanana lokungcangcazela isikrini luhlobo lwesikrini sokulinganisa esindayo esisebenza ngokulinganayo, esisetyenziswa ngokubanzi ekuhlolweni kwemveliso enkulu yemigodi kunye nomsebenzi wokunxiba. Kwisiseko sokugaya kunye nokufunxa itekhnoloji yamanye amazwe, inkampani yethu iyile kwaye yavelisa uhlobo lwe-czxd banana olushukuma isikrini.
Uthotho lwe-GPS oluphezulu lokungcangcazela lokushenxisa isikrini
Ukuze kuhlangatyezwane neemfuno zokubuyiswa kwesilayidi kunye nokucocwa kwezinto ezintle kunye nokuhlelwa, kunye nokufezekisa injongo yokuqhubekeka okukhulu, isiphumo sokuhambisa amanzi kunye nokuziqhelanisa okunamandla, amaza aphakamileyo kunye neempawu zokuqina zentshukumo eziphezulu zamkelwe.
Isikrini sedrum yesikrini
I-GT-series yegubu lesikrini sisixhobo esikhethekileyo sokuhlola esenziwe ngumzi-mveliso wethu wentsimbi, ishishini leekhemikhali, izinto zokwakha, ezemigodi kunye namanye amashishini. Iyoyisa ingxaki yokuvalwa kwescreen xa kuhluzwa izinto ezimanzi ngescreen sokungcangcazela kwescreen kunye nescreen semigca, kuphucula imveliso kunye nokuthembeka kwenkqubo yokuhlola, kwaye kunconywa kakhulu sisininzi sabasebenzisi.
Isikrini sesichumiso seHFS
Isikrini sesichumisi se-HFS luhlobo olutsha lwescreen sokungcangcazela. Isetyenziselwa ubukhulu becala ukufaka izichumisi ezahlukeneyo kunye nezinye izinto zemichiza. Uhlobo lwe-HFS kumatshini wokujonga isichumiso semichiza sazise isakhiwo saseMelika "iterakot" kunye netekhnoloji entsha yerivet yomsesane. Ingxolo lokungcangcazela Phantsi, ukusebenza eliphezulu ukuhlolwa kunye nolondolozo lula.
SZR series eshushu intsimbi eshukuma screen
SZR series eshushu intsimbi eshukuma screen isetyenziselwa ubukhulu becala ore kunye ubungakanani sinter ore kunye lobushushu ka-600-800oc kushishino metallurgical, kwaye ukugqibezela ukuhanjiswa efanayo izixhobo okupholisa.
Phezulu nasezantsi isikrini esingcangcazelayo
Isikrini esingcangcazelayo esingaphezulu kunye nescreen sokungcangcazela esezantsi ziyimfuneko zabathengi beenkampani zethu. Isikrini esingcangcazelayo siyilelwe kwaye senziwa ngokusebenzisa iimpawu zomhlaba.
I-Xbzs yeqokobhe lengalo eshukumayo yesikrini luhlobo olutsha lwezixhobo zovavanyo. Isetyenziselwa ukujonga phantsi kwesitya somlilo kwaye ilungele ukuhlelwa kwezinto ezinkulu, eziphakathi kunye nezincinci izinto eziyimbumba.
Uluhlu lwe-ZDS elliptical elilinganayo lesikrini
Isikrini sobukhulu obulinganayo esilinganayo sisetyenziselwa ukuhlelwa kwesinyithi, i-sinter pellet kunye nomzi mveliso wezemigodi kwishishini lokunyibilikisa isinyithi, kunye nokuhlelwa kunye nokusebenza kovavanyo kumzi mveliso wamalahle. Xa kuthelekiswa nezinye iintlobo zoomatshini bokungqinelwa kweenkcukacha ezifanayo, amandla okulungisa makhulu kwaye ukusebenza kovavanyo kuphezulu.
Ya (k) uthotho olukhulu lokujikeleza kwesikrini
I-Ya (k) uthotho olusisazinge eshukunyiswayo lesikrini sisixhobo esikhulu sokuhlola esenzelwe ishishini lezemigodi. Kukulungele ukuhlelwa kwezinto ezinkulu. Inempawu zomthamo omkhulu wokuqhubekeka, ukusebenza ngokukuko kovavanyo oluphezulu, ukuhlala ixesha elide kunye nolondolozo olufanelekileyo.
ZK series yomgama eshukumayo screen
Iscreen sokungcangcazela kwesikrini sisetyenziselwa ukwahlula kwimigodi yamalahle, imigodi, izinto zokwakha, umbane kunye neekhemikhali, iscreen sesikrini sisebenzisa i-riveting ehamba phambili kakhulu ene-rivet yokutshixa, ngesakhiwo esilula, esomeleleyo nesomeleleyo, ingxolo ephantsi, ukufakwa ngokulula nolondolozo, njl.
Iscreen sokungcangcazela komgama weZSG
ZSG series yomgama eshukumayo screen sisixhobo esisebenza ngokutsha esisebenzayo, esineempawu zokusebenza kakuhle, ukunxiba okuphantsi, ingxolo ephantsi, ubomi benkonzo ende, ukuthintela ungcoliseko, ukunceda kwezoqoqosho, ukugcina amandla kunye nembonakalo entle. Isetyenziswa ngokubanzi ekusebenzeni kokuhlolisiswa kwamasuntswana amakhulu, aphakathi kunye namancinci kwimigodi, isinyithi, amalahle, ishishini lamachiza, amandla obushushu, izinto zokwakha kunye namanye amashishini.